Maraoka: Ahoana Ny Fomba Hanehoana Tsara Kokoa Ny Firenenao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Desambra 2017 2:45 GMT
Manoloana ny fitomboan'ny lazan'ny blaogy mahatonga ny adihevitra momba ny fomba hanehoana ny firenenao, na amin'ny tranga maro, ny firenena onenan'ny olona iray ankehitriny. Maro ami'ireo bilaogy amin'ny fiteny Anglisy any Maraoka no nosoratan'ny vahiny, izay miantso ny firenena ho tanindrazany. Ny hafa kosa nosoratan'ny Maraokana, izay maro amin'izy ireo no monina any ivelany. Ny vokatra dia fifanakalozan-kevitra momba ny fomba hanehoana an'i Maraoka izay miampita sisintany sy zom-pirenena.
Everything Morocco nampahafantatra bilaogy vaovao avy ao Fez, nilaza hoe: “… Avelao mandritra ny iray minitra ireo filazana manjavozavo ary jereo ny taonjato faha-21 ao Maraoka amin'ny alalan'ny mason'ny olona monina ao.”
Izany bilaogy voalaza izany dia i Fes: The Fake Blurry View, izay nampahafantatra ny bilaogin'ny mpanoratra tamin'ny filazana hoe:
Heveriko fa sarotra ho an'ny vahiny monina ao Maraoka ny mahita ny tena sarin'ny fiainana ao Maraoka Fes amin'ity tranga ity. Mampalahelo fa misy ny andianà “manam-pahaizana” vahiny any Maraoka izay miezaka maneho ny tena hoe Maraokanina … ny iray hafa. Tena hafahafa ny vokatra. Mieritreritra, mamaky ny b!@#S@#$ ataon-dry zareo no hiafaranao fa any Maraoka, “sufi” (na inona na inona dikan'izany) avokoa izany rehetra izany sy momba ny tantara, ny fomban-drazana sy ny fomba fanao fahiny …
Tsy manaiky ireo olona ireo fa mitondra fiara, mandray fiarandalamby sy fiaramanidina ny olona ao Maraoka … fa ny Maraokana … dia maoderina tahaka azy ireo ihany. Manitrikitrika izy ireo fa tokony ho toy ny fahitan'izy ireo azy ny kolontsaina Maraokana, araka ny niainana tamin'ny alalan'ny andiana karatra paositra.
Mikasika ny lohahevitra “avelao ny famaritana manjavozavo”) ihany, dia nanam-bahiny bilaogera, Aostraliana mpanao gazety David Margan, izay nanoratra momba an'i Fes ny The View From Fez :
Toerana mistery fotsiny noho ny tsy fahalalanay sy ny tsiron'ny angano sy ny eritreritra izany, ny famakiana ny tantarany sy ny fijerena ny fombany no hamantarana fa tanàna fonenana tahaka ny hafa fotsiny izany. Jereo fotsiny ireo ankizy mpianatra mihazakazaka, mihomehy, manao tarehy ratsy ngezabe tahaka ny lanitra; zazavavy mandehandeha tsimoramora tafiditra anaty tantara foronina, tsy misy hafa amin'ny tanàna maitso, kianjan'ny tanàna na ny lalana ao an-tanànanao izany.
… Ity no Fez. Maraoka. Fez amin'izao fotoana izao … ary mety hitohy hiroborobo sy hitombo izy – insh'allah.
Ao amin'ny Move It Or Lose It (Afindrao izy sao Very), bilaogy ao Tangier, manoratra ny fanehoana an'i Maraoka amin'ny alalan'ny sary, sy ny fanamby miaraka aminy ny mpanoratra:
Tsy mbola nahita vehivavy Maraokana naka sary tao Tanger aho. Tsy tsaroako raha efa nahita vehivavy Amerikanina naka sary teny an-dalamben'i Buffalo aho. Tsy nahita ahy naka ny sarin'ny tanàna ny ankamaroan'ny olona any Tanger. Tsy nahita ahy nanao izany ny antsasak'ireo olona nalaiko sary, izany hoe ny ao ambadiky ny loha, fiara mandalo, izaho kosa eny amin'ny terasy.
Braveheart Does the Maghreb naneho ny fihetseham-pony, hoy izy:
Gaga aho fa ao amin'ny firenena Miozolomana, tsy mba misy mpizahatany mangataka alalana mba haka sary (antenaiko anefa fa misy ihany ireo mangataka). Tsy te alaina sary ny Miozolomana, indrindra indrindra amin'ny andro fety. Tsy tia alaina sary ihany koa aho! Vonona foana koa ny ankizy halaina sary; saingy tokony manontany foana.
Farany, mikasika ny gazety, nanamarika i Myrtus fa “nankany Maraoka tamin'ny alalan'ny Gazetiboky Glamour i Mariane Pearl, vadin'ilay mpanao gazety Amerikana Daniel Pearl, izay maty novonoin'ireo Islamista hiringiriny, mba hanao tatitra manokana mikasika ny manjo ireo vehivavy Maraokana mananon-tena,” vakio ny lahatsoratra, ato amin'ny aterineto.